Tompon’andraikitra ambony manampatra fahefana : nambanany basy izay mitady hisongona ilay 4X4 nentiny | NewsMada
Tompon’andraikitra ambony manampatra fahefana : nambanany basy izay mitady hisongona ilay 4X4 nentiny
Raiki-tahotra ireo mpampiasa ny lalam-pirenena faharoa, teo anelanelan’i Brickaville sy Ampasimadinika, ny alatsinainy teo. Voarahona, voaambana basy izay fiara nitady hisongona ity 4X4 Land Cruiser nitondra ity olona voalaza fa tompon’andraikitra ambony ao amin’ny fiadidiana ny Repoblika. Fanamparam-pahefana !
Tsy mbola nisy tahaka ity ! Fiara 4×4 Toyota V8 iray nanampatra fahefana tany amin’ny lalam-pirenena faharoa, teo anelanelan’i Brickaville sy Ampasimadinika, ny alatsinainy teo, tokony ho tamin’ny 6 ora sy sasany hariva. Araka ny filazan’ireo olona sendra azy ity, nanambana basy izay fiara nikasa hisongona azy ny olona tao amin’ilay 4×4. “Tsy mandeha mafy anefa ity fiara 4×4 miloko volondavenona, ka voatery manaraka azy aoriana araka izay tiany. Rehefa nisy fiara maromaro taoriany vao nahasahy nisisika ny rehetra”, hoy ny mpamily nitantara ny zava-nanjo azy.
Nampandre ny mpitandro filaminana tany Toamasina ny mpamily sasany, ka voalaza fa nanao sakana ireo. Tetsy andaniny ihany koa ny resaka kidnapping ka haingana ny fandraisana fepetra nataon’ny mpitandro filaminana sao misy ifandraisany ny tranga. Nohamafisina ny sakana sy ny fisavana fiara ny alatsinainy alina, ka voalaza fa fiara iray ana tompon’andraikitra ao amin’ny fiadidiana ny repoblika ilay 4×4. Tsy nisy ny fanononana anarana, kanefa kosa nanamafy ny teo anivon’ny mpitandro filaminana momba io fiara io. Tsy nisy araka izany ny fisamborana na fitazonana fa navela nandeha ilay fiara.
Raha ny filazan’ireo niharan’ny antsojain’ity fiara 4×4 ity, fanamparam-pahefana ity tranga ity. Tsy zava-baovao amin’ny fomba fanaon’ny manampahefana eto amintsika ny raharaha toy izao. Tsy mazava rahateo ny lalàna mifehy ny olona afaka mitana basy, mandrahona amin’ny basy, ny mahazo lalana tsy azo bahanana eny amin’ny arabe.
Misy ny lalana mifehy izany eto amintsika kanefa tsy fantatry ny vahoaka akory, ka hararaotin’ny manampahefana. Iza ny olona afaka mampiasa jiro manga, manana mpisava lalana, manana mpiambina manokana, sns.
Anisan’ny tranga mampitaraina ny olona ny fahitana olona ambony eo anivon’ny mpitandro filaminana, misy mpisava lalana amin’ny 4×4 mihitsy. Nisy fotoana teto an-dRenivohitra nanahirana ny olona ny fahitana azy io, saingy notazanim-potsiny. Iza no manaja lalàna sy manara-dalàna, sa samy manao izay tiany rehefa mahazo fahefana?